Ihe ngosi mmekọrịta ọhụrụ iji họrọ eriri Apple Watch na weebụsaịtị Apple | Esi m mac
Ọhụrụ mmekọrịta gallery ịhọrọ eriri Apple Watch na weebụsaịtị Apple
Pedro Rodas kwuru | | Apple Watch, ọtụtụ
Otu n'ime akwụkwọ akụkọ ọhụrụ ndị emere na Mgbakọ Isi na Machị 21 bụ ụdị ọhụrụ na agba nke eriri maka Apple Watch, onye pere mpe nke ezinụlọ Apple. Naịlọn straps abatawo na ndụ anyị, agba ọhụrụ nke fluoroelastomer Otu n'ime nke a bụ ogologo odo na agba ọhụụ na-eche ogologo oge n'ihe banyere Milanese Loop ma ọ bụ kpochapụwo na nkechi nkechi.
Ọfọn, nke ahụ abụghị naanị ihe emelitere na nke ahụ bụ na ebe nrụọrụ weebụ Apple metụtara Apple Watch agbanweela ihu site na ịgbakwunye gallery mmekọrịta anyị ga-enwe ike hazie Apple Watch ụdị ọ masịrị. na anyi choro jiri eriri anyi choro ka anyi we hu otu ogwugwu ikpeazu ga-adi.
Anyị kwesịrị icheta na Apple na-ere ụfọdụ ụdị elekere anya, ya bụ, okwu aluminom ma ọ bụ nchara nwere eriri ụfọdụ nke gbanwere kemgbe ọnwa. Wayzọ a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ụfọdụ kit ị nwere ike ịhọrọ ya ugbu a ma ghara ịzụta eriri iche iche. Ihe abụghị na ọ gbanwere ebe ọ bụ na enweghị ike ịjụ ha ngwa iwu emere ka ị tụọ, ya bụ, họrọ igbe ịchọrọ, mgbe ahụ eriri ahụ nwere Apple zitere gị igbe nwere set. Anyị ga-ahọrọ a kit nke ndị ha rere ere ma zụta belt dị iche iche.
N'ụzọ dị otú a, a na-ekwe nkwa ire ọ dịkarịa ala otu eriri nke abụọ ebe ọ bụ na onye ọrụ agaghị enwe afọ ojuju na ịnwe elekere mgbe niile n'otu ụzọ ahụ. Iji hụ otú nhazi dị iche iche si dị, ha kere usoro mmekọrịta a nke ị ga-ebu ụzọ họrọ ikpe ịchọrọ, ma ọ bụ 38 mm ma ọ bụ 42 mm, Mgbe ahụ ị họrọ eriri ị chọrọ site na ịde ụdị dị iche iche na n'ikpeazụ ị ga-ahụ etu o si dị na ihuenyo dị iche iche nke watchOS.
Eziokwu bụ na ọ na-atọ ụtọ ịhụ ka Apple Watch nwere ike ịdị na nhọrọ dị iche iche ọsọ ọsọ na enweghị nhịahụ gaa na Storelọ Ahịa Apple. Anyị na-agba gị ume ịbanye Na njikọ na-esonụ nke bụ ebe mmekọrịta mmekọrịta dị. Iji nweta ya, ihe niile anyị ga - eme bụ itinye Apple Watch taabụ na weebụsaịtị Apple wee pịa ngalaba ahụ Nhazi. Ga-ahụ na ntakịrị ihu ala n’elu peeji a bụ ihe ntụzi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Watch » Ọhụrụ mmekọrịta gallery ịhọrọ eriri Apple Watch na weebụsaịtị Apple
Etu esi ejikọ Apple Watch na iPhone ọhụrụ
Apple weputara Apple tv ad ohuru nke akporo "The Kiss"